राशि अनुसार जान्नुहोस् तपाईंको ग्रह स्वामी र इष्टदेव कुन हुन् ? कसरी प्राप्त हुन्छ सफलता नै सफलता – Patrika Nepal
राशि अनुसार जान्नुहोस् तपाईंको ग्रह स्वामी र इष्टदेव कुन हुन् ? कसरी प्राप्त हुन्छ सफलता नै सफलता
मंग्सिर ६, २०७८ सोमबार 49
मंहगाईको जमानामा कमाई कम हुँदै गएको छ । खर्च ज्यादा भइरहेको छ । यसैले अधिकांशलाई भविष्यको चिन्ता ज्यादा छ । यसैले तपाईको जीवनमा धनको कमी हुन नदिने ज्योतिषशास्त्रको उपाय आज प्रस्तुत गर्दै छौ । राशिअनुसारको सीर्फ एक मन्त्र यसरी उच्चारण गरे तपाईले सोचेजति धम कमिनेछ । आज हामी सबै राशिको धनप्राप्ति गर्ने मन्त्र दिइरहेका छौ ।
मेष:मेष राशिको स्वामी मंगल ग्रह हो । यो राशिको इष्टदेव हनुमान जी हुन् । त्यसैले तपाई हरेक दिन हनुमानको मन्दिर गएर ओम हनुमते नमः को जाप गर्नुहोस् । यो आराधना तपाईका लागि चमत्कारीक सहायता हुनेछ । यसले आर्थिक र वित्तिय क्षेत्रमा लाभ दिनेछ ।वृष:वृष राशिको स्वामी ग्रह शुक्र हो । यो राशिका मानिसको इष्टदेव माता दुर्गा हुन् । तपाईले हरेक दिन दुर्गा माताको पूजा र उनको मंत्र जाप गरे धन तथा सम्बन्धका सबै समस्य अन्त्य हुनेछन् । मंत्र हो ओम दुर्गादेव्यै नमः यो मंत्र को एक मालाका साथ जाप गर्नुहोस् ।
मिथुन:मिथुन राशिको स्वामी ग्रह बुध हो । यस राशिको इष्टदेव भगवान गणेश हृुन् । हरेक दिन एक मालाका साथ ओम गं गणपते नमः को जाप गर्नुहोस् । तपाईलाई सफलता अवश्य हुनेछ । जागिर तथा व्यवसायमापनि चमत्कार हुनेछ ।कर्कट:कर्कट राशिको स्वामी ग्रह चंद्रमा हो । यो राशिको इष्टदेव भगवान शिवजी हुन् । ज्योतिषका अनुसार हरेक बिहान ओम नमः शिवाय को जाप गरे धनलाभ हुनेछ । भगवान शिवको जलाभिषेक पनि गर्नुहोस् ।
सिंह:सिंह राशिको स्वामी ग्रह सूर्य हो । यसको इष्टदेव सूर्य हुन् । यो राशिले हरेक बिहान सूर्य देवलाई अर्घ्य दिनुहोस् । यसो गर्दा तपाईको आपके जीवनमा हरहमेशा सकारात्मक ऊर्जा आउँनेछ । साथै ओम सूर्यायें नमः मन्त्र मालाका साथ जप गर्नुहोस् ।कन्या:यो राशिको स्वामी ग्रह बुध हो । इष्टदेवता भगवान गणेश हुन् । हरेक बिहान र साँझ ओम गं गणपते नमः मन्त्रको जाप गर्नुहोस् । धनप्राप्ति हुनेछ ।
तुला:तुला राशिको स्वामी ग्रह शुक्र हो । इष्टदेव देवी लक्ष्मी हुन् । तपाई हरेक बिहान माता लक्ष्मी को पूजा गर्नुहोस् । एक मालाका साथ ओम महालक्ष्म्यै नमः मन्त्रको जाप गर्नुहोस् । तपाईको आर्थिक अवस्था चमत्कारीक रुपमा सुधार हुनेछ ।वृश्चिक:वृश्चिक राशिको स्वामी ग्रह मंगल हो । इष्टदेव हनुमानजी हुन् । तपाईले हरेक बिहान इष्टदेवको आराधना गर्नुभयो भने सबै समस्याबाट छुटकारा मिल्नेछ । तपाईका लागि मन्त्र छ ओम हनुमते नमः यो मन्त्रको १०८ पटक जाप गर्नुहोस् ।
धनु;धनु राशिको स्वामी ग्रह बृहस्पति हो । इष्टदेव भगवान विष्णु हुन् । धनु राशिका मानिसले ओम श्री विष्णवे नमः मंत्र को १०८ पटक हरेक दिन जाप गर्नुहोस् चमत्कारीक धन प्राप्ति तथा सफलता मिल्नेछ ।मकर:मकर राशिको स्वामी ग्रह शनि हो । इष्टदेवपनि शनिदेव हुन् । तपाईले शनि या हनुमान जीको पूजा गर्नुहोस् । यो राशिका मानिसको लागि अत्यन्तै राम्रो हुनेछ । तपाई हरेक बिहान ओम शम् शनिश्चराये नमः मंत्र को १०८ पटक जाप गर्नुहोस् । यसले सबै बाधा हटाउनेछ ।
कुंभ:कुंभ राशिको स्वामी ग्रह शनि हो । शनिको गुरु भगवान शंकर हुन् । कुंभ राशिवालाको शनिका साथ–साथ भगवान शंकर कोपनि पूजा गर्न जरुरी छ । हरेक बिहान ओम महामृत्युंजय नमः को १०८ पटक जाप गरे चमत्कारीक फाईदा हुनेछ ।मीन:मीन राशिको स्वामी ग्रह बृहस्पति हो । इष्टदेव भगवान विष्णु हुन् । यो राशिले हरेक बिहान ओम नारायणा नमः र ओम गुरुवे नमः को १०८ पटक जाप गर्न जरुरी छ । यीनको पूजा गरे धन प्राप्ति तथा व्यवसायमा सफलता मिल्नेछ ।
Prevबिहान यी सत्कर्म गर्दा कहिल्यै आउदैन परिवारमा संकट र गरिवी !
Next१९ वर्षकी चर्चित गायिका रचना रिमालले गीत गाएरै दीनकै १ लाखसम्म कमाउँछिन्
देशभर भित्राउन तयार धानवालिलाई हावाहुरी र पानीले पुर्‍यायो क्षति
मात्रै २ वटा ल्वाङले हटाउनेछ यतिधेरै स्वास्थ्य समस्या, यसरी गर्नुस् प्रयोग